१८:०३, १६ जुन २०११ जस्तै गरी पुनरावलोकन
४२ bytes added , ९ वर्ष अघि
१७:५९, १६ जुन २०११ जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने)
(नयाँ पृष्ठ: साधारण बोलचालको भाषामा '''कर्म'''को अर्थ हुन्छ 'क्रिया' । व्याकरण...)
१८:०३, १६ जुन २०११ जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने) (रद्द गर्ने)
[[दर्शन]]मा '''कर्म''' एक विशेष अर्थमा प्रयुक्त हुन्छ। जे पनि मनुष्यले गर्छ जसबाट कुनै फल उत्पन्न हुन्छ। यो फल शुभ, अशुभ अथवा दुवैभन्दा भिन्न हुन्छ। फलको यो रूप क्रिया द्वारा स्थिर हुन्छ। [[दान]] शुभ कर्म हो र हिंसा अशुभ कर्म हो। यहाँ कर्म शब्द क्रिया र फल दुवैको लागि प्रयुक्त भयो हो। यो कुरा यस भावनामा आधारित छ कि क्रिया सर्वदा फल संग संलग्न हुन्छ। क्रियाबाट फल अवश्य उत्पन्न हुन्छ। यहाँ ध्यान राख्नु पर्छ कि शरीरका स्वाभाविक क्रियाहरु यसमा समावेश छैनन्। आँखाका पलकहरु को उठ्नु, बन्द हुनु (आँखा झिम्क्याउनु) पनि क्रिया हो, तर यसले फल उत्पन्न हुँदैन। दर्शनको सीमामा यस प्रकारको क्रियाको कुनै महत्व यसैले छैन कि त्यो क्रिया मनद्वारा प्रेरित हुँदैन। उक्त सामान्य नियम मनद्वारा प्रेरित क्रियाहरुमा नै लागू हुन्छ। जानेर कसैलाई दान दिन अथवा कुनैको वध गर्न नै सार्थक हो। तर अनजानमा कसैलाई उपकार गर्न अथवा कसैलाई हानि पुर्‍याउनु के कर्म को उक्तपरिधिमा आउँदैन? कानूनमा भनिन्छ कि नियमको अज्ञानतामा मनुष्यलाई क्रियाको फलबाट बचाउन सक्तैन। [[गीता]]ले पनि भन्छ कि कर्मका शुभ अशुभ फललाई अवश्य भोग्नु पर्दछ, तयसबाट छुटकारा मिल्दैन। यस स्थितिमा जानी नजानी गरेका क्रियाको शुभ वा अशुभ फल हुन्छ नैं। अनजानमा गरेको क्रियाहरुको बारेमा केवल यति नै भनिन्छ कि अज्ञान कर्ताको दोष हो र त्यस दोषको लागि कर्ता नै उत्तरदायी छ। कर्ताको क्रियामा प्रवृत्त हुन अघि पहिला क्रियासित सम्बन्धित सबै कुराहरुको पता लगाउनु पर्छ। स्वाभाविक क्रियाहरुसित अज्ञानमा गरेका क्रियाहरुमा भेद केवल यति हो कि स्वाभाविक क्रियाहरु बिना मनको सहायताले आफै हुन्छन् अनि अज्ञानप्रेरित क्रियाहरु आफै हुँदैनन् यसमा मनको हात हुन्छ। नचाहे पनि आँखा झिम्कन्छ, तर नचाही भएका अज्ञानमा कुनै क्रिया गर्न सकिन्न। क्रियाको परिणाम क्रियाको उद्देश्य भन्दा भिन्न हुन्छ, फेरि पनि यो आवश्यक हुदैन कि क्रिया गरियोस्। अत: कर्मको परिधिमा ती क्रियाहरु र फल आउँछन् जुन स्वाभाविक क्रियाहरु भन्दा भिन्न छन्।
<includeonly>क्रिया र फलको संबंध [[कार्य-कारण-भाव]] को अटूट नियममा आधारित हो। यदि कारण विद्यमान हो त कार्य अवश्य हुनेछ। यो प्राकृतिक नियम आचरण को क्षेत्रमा पनि सत्य हो। अत: भनिन्छ कि क्रियाको कर्ता फलको अवश्य भोक्ता हुन्छ। बौद्धोंले कर्ता को क्षणिक माना हो तर यस नियम को चरितार्थ गर्नको लागि उनी क्षणसंतानमा एक प्रकार को एकरूपता मानते भएका भन्छन्ं कि एक व्यक्ति को संतान दोश्रो व्यक्ति को संतान से भिन्न हो। क्षणभेद होने भन्दा पनि व्यक्तित्वमा भेद हैन होता; अत: व्यक्ति पूर्वनिष्पादित क्रियाको उत्तर कालमा भोग करता नै हो। यिद हामी यो न मानें त भन्न पडेगा कि कुनै दोश्रो को द्वारा को गई क्रियाको फलको कुनै दोस्रो भोगता हो जुन तर्क विरुद्ध हो। यदि यस नियममा पूर्ण आस्था हो त तर्क हामीलाई यसको एक अन्य निष्कर्ष को पनि स्वीकार गर्नको लागि बाध्य गर्छ। यदि सबै क्रियाओंको फल भोगना पर्दछ त उनि क्रियाओंको के हुनेछ जसको फल भोगने को पहिले नै कर्ता मरछ? या त हामीलाई कर्म को सिद्धांतलाई छोडन हुनेछ या फिर, मानना हुनेछ कि कर्ता हैन मरता, त्यो केवल शरीर को बदल दिइन्छ। भारतीय विचारकोंले एक स्वर से दोस्रो पक्ष नै स्वीकार गरेको छ। उनी भन्छन्ं कि मरन शरीरको स्वाभाविक कर्म हो, तर भोग को लागि यो आवश्यक छैन कि त्यहि शरीर भोगे जसले क्रिया को हो। भोक्ता अलग हो र त्यो कर्मफलको भोग गर्नको लागि दोस्रो शरीर धारण गर्छ। यसै को पुनर्जन्मवाद भन्छन्ं। मृत्यु शरीर को आनुषंगिक स्वाभाविक क्रिया हो जसको कर्ममा कुनै प्रभाव हैन होता। अत: कर्म को सिद्धांतलाई पुनर्जन्म से अलग गरेर हैन राखयो जा सकता।
"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:MobileDiff/121141" बाट अनुप्रेषित